Raiso ny OUKITEL K7 miaraka amina fihenam-bidy 30 dolara amin'ny fanombohana | Androidsis
OUKITEL dia marika iray izay manamboatra akany ho azy eny an-tsena miaraka amin'ireo telefaona mahaliana indrindra. Ny mpanamboatra dia nanolotra anay maodely miavaka amin'ny batterie lehibe ananany. Ohatra tsara amin'izany ny OUKITEL K7, miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh, izay hanome anao fizakantena lehibe. Finday izay ho hita manomboka rahampitso.
Ankoatr'izay dia mankalaza ny fahatongavany eny an-tsena amin'ny fihenam-bidy manokana. Satria ity OUKITEL K7 ity dia ho hita ao amin'ny a vidin'ny $ 159,99 tamin'ny fanombohany, fihenam-bidy $ 30 amin'ny vidiny voalohany. Misaotra ny fiaraha-miasa marika amin'ny Banggood.
Io no maodely ara-toekarena indrindra misy bateria lehibe eny an-tsena ary misy sandany lafo indrindra amin'ny vola. Ka tsy isalasalana fa safidy tsara tokony hodinihina. Ho an'ireo liana, Ireto ny masontsivana ao amin'ny OUKITEL K7:
Efijery 6-inch miaraka amin'ny vahaolana 2160 × 1080 pixel sy ny tahan'ny 18: 9
Mpandrindra: MediaTek MT6750T dia nizotra tamin'ny 1.5 GHz
Tahiry anatiny: 64 GB
Fakan-tsary miverina aoriana: 13 + 2 MP
Fakan-tsary aloha: 5 MP
Batterie: 10.000 XNUMX mAh misy sarany haingana
Android 8.1 Oreo ho rafitra fiasa
Noho izany, azontsika atao ny mahita fa telefaona tena izy io amin'ny lafiny famaritana. Inona koa, ny OUKITEL K7 dia efa tonga miaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa. Mba hahafahanao mankafy ny tombony rehetra atolotray anay amin'ity lafiny ity. Manana sensor momba ny rantsan-tànana koa izahay, ahafahantsika mamantatra ny tenantsika sy mamoha ny telefaona amin'ny fotoana rehetra.
Ny tolotra fanolorana ny OUKITEL K7 dia manomboka rahampitso 19 Jona ary haharitra hatramin'ny 25. Amin'ireto daty ireto dia afaka mividy telefaona amin'ny vidiny $ 159,99 ianao. Fihenam-bidy tsara $ 30 amin'ny vidiny tany am-boalohany. Aza adino io fotoana io! Azonao ilay izy misy amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny OUKITEL K7 azo alaina mialoha ny vidiny $ 159,99
MyGica ATV1960 Famerenana: eo am-pelatananao ny hery !!